Kofi Annan oo lagu aasayo dalkiisa - Worldnews.com
Kofi Annan oo lagu aasayo dalkiisa
Waxaa soo idlaaday qabanqaabada toddobaadyada socotay ee loogu diyaar garoowayey aaska mid kamid diblomaasiyiinta loogu ixtiraam badanyahay qaarada Afrika.
Labadii maalmood ee ugu dambeeysay waxaa magaalada Accra ee dalka Ghana si aad ah looga dareemay aaska Annan, iyadoo dadka u dhashay dalkaasi iyo madax
Waa kuwee hoggaamiyeyaasha ka qayb galay aaskisa?
Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha caalamka ayaa isugu yimid si ay u sagootiyaan meydka siyaasaiga rug caddaaga ahaa ee Africa Kofi Anan, oo lagu aasay magaalada uu ku...
Kofi Annan oo geeriyoodey [Akhri Taariikhdiisa]
BERN, Switzerland - Waxaa maanta oo Sabti ah magaalada Bern ee caasimadda dalka Switzerland ku geeriyoodey Xoghayihii hore ee Qaramada Midoobey, Kofi Annan. Hay'adda uu...
Gareowe Online 2018-08-18
Fikradaha dadka ee geerida Kofi Annan
Halkan waxaan ku soo gudbinaynaa fikradaha qaar ka mid ah dadka Facebook nagala socda ay ka dhiibteen geerida xoghayihii hore ee Qaramada Midoobay, Kofi Annan oo ku...
BBC News 2018-08-18
MUQDISHO, Soomaaliya - Xoghayihii 7aad ee Qaramadda Midoobey, Kofi Annan ayaa shalay ku geeryooday dalka Switzerland, isagoo 80 jir ah, waxaana dhimashadiisa loo tiiriyay...
Taariikh-nololeedka Xoghayihii hore ee Qaramada Midoobay Kofi Annan ee geeriyooday
Xoghayihii hore ee Qaramada Midoobay Kofi Annan oo geeriyooday: TAARIIKH-NOLOLEEDKIISA Xoghayihii hore guud ee Qaramada Midoobay Kofi Annan, ayaa maanta geeriyooday, isaga...
Qaran News 2018-08-19
Hogaamiyayaasha caalamka oo ka hadlay geerida Kofi Annan
Hogaamiyayaal horey xilal u hayay iyo kuwa imika haya ayaa amaan kala dul dhacay xoghayihii hore ee guud ee Qaramada Midoobay Kofi Annan oo shalay geeriyooday. Mr Annan...
Hogaamiyayaal horey xilal u hayay iyo kuwa imika haya ayaa amaan kala dul dhacay xoghayihii hore ee guud ee Qaramada Midoobay Kofi Annan oo shalay geeriyooday. Mr Annan ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay Qaramada Midoobay ka hor inta uusan noqon xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay. Madaxwaynihii hore ee mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mr Annan uusan waligii joojin...
Kofi Annan oo Geeriyooday
Xoghayihii hore ee Qaramada Midoobay Kofi Annan, ayaa maanta geeriyooday, isaga oo ay da’diisu aheyd 80 sano jir. ......
Noloshii Kofi Annan: Madaxii QM iyo ku guulaystihii jaa\_'isadda Nobel
Waxa uu ahaa iskuulkiisa kuleejada ah ee ku yaallay galbeedka Africa meesha uu Kofi Annan - ninka marka dambe noqon doona dublamaasiga ugu sarreeya caalamka - ka bartay mid ka mid ah cashirradiisii ugu muhiimsanaa. Casharkaas waxa uu ahaa, sida uu goor dambe sheegay "In xanuun kasta oo la dareemo uu khuseeyo dadka oo dhan meel kasta oo ay joogaan". Fikraddaas waxay u muuqatay...
Ghana iyo Ivory Coast oo maxkamad ku kala baxay
Maxkamad caalami ah ayaa go'aamisay in Ghana aanay ku xadgudbin madax bannaanida dhulka ee Ivory Coast, ka dib markii ay xukuumadda Accra bilowday inay shidaal ka qodo xuduud badeed ay ku muransan yihiin. Ghana ayaa saddex sano ka hor dacwadda gaysay...
Buug cusub oo laga qoray madaxtinimadii Nelson Mandela
Waxaa lasoo saaray buug cusub oo laga qoray madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela, gaar ahaan shanti sano ee uu madaxweynaha ka ahaa dalkaas. Buuggan oo uu Mandela laftiisa qoray, ayuusan balse dhamaystirin sababo la xiriira da'diida iyo caafimaad daro, waxaana hadda buuga dhamaystiray qoraaga lagu magacaabo Mandla Langa oo isaga laftiisa ka mid ahaa dadkii u...